Shina miakatra sy midina fanamboarana horonantsary sy fanamboarana | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery mihetsiketsika ambony sy ny efijery mihetsiketsika ambany dia ny takian'ny mpanjifan'ny orinasanay. Ny efijery mihetsiketsika dia noforonina sy novokarina tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny toetra spatial. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny takiana amin'ny fikarakarana ara-materialy, ny endrika fisavana dia azo zaraina ho efijery tsipika, efijery mihetsiketsika boribory ary fomba fitiliana hafa, ary tsy hisy ny fangarony sy ny fanakanana ny lavaka.
Ny tsy fitovizan'ny efijery mihetsiketsika ambony sy ny efijery mihetsiketsika ambany dia tsy mitovy ny toerana fametrahana ny vibrator. Ny vibrator dia apetraka amin'ny takelaka roa amin'ny lafiny ambony amin'ny sisin'ny efijery, izay antsoina hoe ny écrigement ambony. Ny vibrator napetraka eo ambanin'ny tontolon'ny efijery dia antsoina hoe ny efijery mihetsiketsika ambany. Ny andiana vibrator mitovy dia ampifandraisina amin'ny fampifangaroana iraisan'ny rehetra. Ny vibrator dia voaisy tombo-kase amin'ny peratra labyrint. Fanosorana menaka maina.
Ity andiana efijery ity dia miorina amin'ny boaty efijery, efijery tsy mahazaka, vibrator ary lohataona manalefaka. Ny vibrator dia ampiasaina ho toy ny loharano hovitrovitra.
Ity andiana milina fakan-tsarimihetsika ity dia misy famehezana tsara, fahaiza-manao fanodinana lehibe, matanjaka sy mateza, androm-piainana lava, ary tena mety amin'ny fikojakojana sy fanamboarana. Izy io dia mety amin'ny fitrandrahana vy, arintany, fitaovana fananganana, herinaratra, indostrian'ny simika ary indostria hafa, indrindra amin'ny indostrian'ny metalurgique. Izy io dia masinina fanaraha-maso izay matetika ampiasaina amin'ny fako lafaoro, zavamaniry koka ary concentrator.
Endri-javatra amin'ny vovoka mandeha ho azy siever:
1.Ny efijery mihetsiketsika mivantana dia manana endrika tsara sy maharitra, mora ampiasaina.
2. Fanovana sy fanadiovana harato mora sy haingana.
3.Ny ampahany rehetra amin'ny fifandraisana amin'ity karazana efijery mihetsiketsika ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony mba hiantohana ny fahadiovana.
4.Ny tsy fahombiazan'ny asa, fikojakojana mora ary fanamboarana mety.
5.Efa tsy ny fanaingoana mahazatra, ny savaivon'ny sieve lavaka dia azo ampifanarahana arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Previous: SZR andian-tsarimihetsika mafana mihetsiketsika
Manaraka: Efijery mihetsiketsika Boom